Samsung Galaxy Tab S8: Gwaro rako rakazara remutengi
February 14, 2022 by Martin6
Mahwendefa matsva eSamsung anotora zvese zvakanaka nezve S7 nhevedzano uye anowedzera mureza kuita uye kutsigirwa kwenguva refu. Samsung yakaigogodza kunze kwepaki neGalaxy Tab S7 yakatevedzana, saka isu taiva nekunetsekana kwekuti Samsung yaizobata sei kudzokororwa kwayo kwemapiritsi. Zvinoitika kuti isu hatifanirwe kunetseka: iyo Galaxy Tab S8 nhevedzano inotora yakashongedzwa dhizaini, inoyevedza kuratidza, uye ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung Galaxy Tab S8: Gwaro rako rakazara remutengi
Samsung Galaxy Tab S8 yakatevedzana mhenyu mifananidzo yakaonekwa mune certification runyorwa
Samsung ichavhura matatu emureza mahwendefa sechikamu cheGalaxy Tab S8 mutsara gare gare gore rino. Mumwedzi mishoma yadarika, takaona kuvuza kwakati wandei nezve Samsung inouya piritsi mutsara iyo yakatipa muchidimbu dhizaini yavo uye yakasimbisa mamwe magadzirirwo ehardware. Nepo Samsung isati yagovera chero ruzivo rwepamutemo nezve iyo Galaxy Tab S8 mutsara kusvika parizvino, rarama ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung Galaxy Tab S8 yakatevedzana mhenyu mifananidzo yakaonekwa mune certification runyorwa